तपाईं Purim परिचित छैनन् भने, हामीलाई तपाईंले ज्योति गरौं. वेशभूषा संग, , खेल र पिउने धेरै, Purim यहूदी भन्दा raucous मध्ये एक छ बिदा. तपाईं दुष्ट हामानले योजना हमलहरुलाई रोकन सुन्दर एस्तर थाहा हुनेछ, रक्सीले मातेको रही र के hamantaschen छन् को अनुकूलन. तर हामी यस बारे केही कुरा छन् अनुमान गर्दै छुट्टी भनेर आश्चर्य हुन सक्छ र तपाईं यदि थाहा राम्रो हुनेछ योजना उत्सव मा सामेल हुन र Purim मनाउन.
यहाँ एक सुन्दर कुराकानी स्टार्टर छ. के तिमीलाई थाहा थियो एस्तर थियो शाकाहारी (वा कम से कम एक flexitarian). Midrash अनुसार, जबकि रानी एस्तर राजा अहासूरस को दरबार मा बस्थे, त्यो फलियां को हदसम्म निर्वाचकगण त्यो kashrut को व्यवस्था तोड्न थियो भनेर एक शाकाहारी आहार पछि(आहार व्यवस्था). यस कारणले, त्यहाँ एक परम्परा छ खाने सिमी र मटर तपाईं Purim मनाउन गर्दा. (जे भएपनि, तपाईंले सबै Booze पछि स्वस्थ कुरा गर्न आवश्यक हुनेछ र hamantaschen)
Ashkenazi यहूदीहरूलाई, सायद सबै भन्दा व्यापक आयोजित खाना परम्परा Purim मा जस्तै त्रिकोणात्मक आकारको खाद्य पदार्थ खाने छ kreplach र hamantashen पेस्ट्री. Kreplach ग्राउण्ड बीफ वा चिकन संग भरिएको एक पास्ता त्रिकोण हो. Hamantashen पेस्ट्री आटा को त्रिकोणहरु एक भरी को वरिपरि प्राय: मिति वा अफीम को बीउ संग बनाइन्छ.
टर्की कुरा गर्दै
राजा Ahasuerus भारत देखि इथोपिया गर्न शासन गरे, बाट “यो Kush फेंक।” हिब्रू मा, शब्द हिड्ने दुबैको मतलब “भारत” र “टर्की।” यसरी, तिनीहरूले Purim मनाउन गर्दा केही मानिसहरू टर्की खान. अरूलाई जस्तै इथियोपियाली दाल रूपमा इथियोपियाली व्यञ्जन खाने. तपाईंको Purim भोजन मा एक टर्की पकवान समावेश गर्न, प्रयास caramelized प्याज balsamic लेदो संग रोस्ट टर्की वा panko Cranberry र नासपाती चटनी संग टर्की cutlets crusted.
Purim र Mardi Gras प्रत्येक एक प्रमुख अघि एक महिना ठ्याक्कै गिरावट, सायद को उनको सम्बन्धित परम्परा को प्रमुख धार्मिक उत्सव. प्रत्येक गर्दछ, paradoxically, गहिरो धार्मिक गम्भीरता को अवधि एक farcical परिचय रूपमा. मसीहीहरूको लागि, मोटी को अतिरिक्त मंगलवार रूपमा सेवा गर्दैछन् एक आउटलेट आत्म दाबी र आत्म gratification Lent को अवधि अघि लागि, यसको आत्म अस्वीकार र यहाँ सम्म कि आत्म मुर्ति को एक लामो अवधि संग.
जहाँ यूरोप भर Purim गतिविधिहरु मनाउन
अब ARIEL द्वारा एक पंक्ति मा दोस्रो बर्ष को लागी संगठित – यहूदी विद्यार्थी जेनेभा को संघ. वास्तबमा, त्यहाँ बढी छन् 300 विद्यार्थी निम्न देशका र जवान वयस्कहरूको: स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, अस्ट्रिया, र धेरै अन्य ठाउँहरूमा. यी Purim पार्टी goers एक अद्वितीय मा एक साथ Purim मनाउन भेट हुनेछन् सप्ताह ज्यूरिखको. लागि टिकट र थप जानकारी, गर्न भन्दा टाउको एरियल फेसबुक पेज.
यो वर्ष, मनाउन मा Purim पेरिस. रोशनी को शहर, प्रेमको शहर, कला को शहर. यो अब पनि अविश्वसनीय युवा यहूदी को शहर हो मोरिसटाउन Purim पार्टी! तपाइँको सबैभन्दा सुरुचिपूर्ण संगै आउनुहोस् पेरिसियन Purim पोशाक. तिमी सक्छौ यो पार्टी खोज्नुहोस् मा आश्चर्यजनक मेयो प्रदर्शन कला केन्द्र मा मोरिसटाउन. घटना खानपान छ वृद्ध युवा यहूदी व्यवसायी लागि 21 गर्न 39. टिकट प्राप्त यहाँ
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcelebrate-purim%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#Purim #पुरिमिन युरोप #PuriminMarch #Purimparty europetravel तिहार longtrainjourneys रेल सुझावहरू रेल यात्रा